फोन उठाउने बित्तिकै `हेलो´ भन्ने चलन कहाँबाट कसरी आयो त ? जान्नुहाेस् – List Khabar
Home / समाचार / फोन उठाउने बित्तिकै `हेलो´ भन्ने चलन कहाँबाट कसरी आयो त ? जान्नुहाेस्
फोन उठाउने बित्तिकै `हेलो´ भन्ने चलन कहाँबाट कसरी आयो त ? जान्नुहाेस्
admin November 2, 2021 समाचार Leaveacomment 458 Views
फोन उठाउने बित्तिकै `हेलो´ भन्ने चलन कहाँबाट कसरी आयो त ? जान्नुहाेस् । मोबाइल वा ल्यान्डलाइनमा कल उठाउँदा हेलो भन्ने शब्द उच्चारण गरिन्छ । किन यसो गरिन्छ त ? यसको एक रमाइलो इतिहास छ ।
अक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्सनरीका अनुसार ‘हेलो’ शब्द प्राचीन जर्मन शब्द ‘होला’बाट बनेको हो । ‘होला’को अर्थ हुन्छ ‘के छ ?’ प्राचीन समयमा यस शब्दको प्रयोग सामुुद्रिक यात्राको क्रममा जहाजका मान्छेले गर्थे । अंग्रेजी साहित्यका पिता मानिने जोफ्रे चोसरको पालामा यो शब्द हालो भनी उच्चारण गरिन्थ्यो भने शेक्सपियरको पालामा हालू भनिन्थ्यो ।
पछि यसलाई हालवा, हालूवा, होलो पनि भनियो । टेलिफोनका आविष्कारक अलेक्जेन्डर ग्राहम बेलले १८७६ मा आविष्कारको पेटेन्ट राइट लिएका थिए । पहिलोचोटि उनले आफ्नी प्रेमिकालाई फोन गरे । प्रेमिकाको नाम मार्गरेट ह्यालो थियो । उसैलाई बेलले मायालु पारामा ह्यालो भनी बोलाए । टेलिफोन बजारमा आउन थालेपछि मान्छेले ‘कोही हुनुहुन्छ ?’ भन्थे ।
Previous कर्मचारीहरुलाई तिहारमा यती धेरै दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको यस्तो आदेश?
Next भोलि कार्तिक १७ गते बुधबार ,शुभ-अशुभ कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस राशिफल!